आखिर के–के हुन् त भोक लागिरहनुका कारण ? - ज्ञानविज्ञान
भनिन्छ कि निद्रा हरेक रोगको औषधि हो । सातदेखि आठ घन्टाको पर्याप्त निद्राले तपाईंलाई स्वस्थ मात्र होइन, सुन्दर र उर्जावान पनि बनाइराख्छ ।
पर्याप्त निदाइएन भने शरीर थाकिरहेको हुन्छ र त्यस थकानलाई मेटाउनका लागि पर्याप्त उर्जाको आवश्यकता हुन्छ जुन भोजनबाट प्राप्त हुन सक्छ ।
उर्जा नहुँदा बारम्बार भोक लागिरहन्छ । एकपटक उर्जा प्राप्त भयोउ भने लगातार भोकको समस्या रहँदैन ।
६ देखि ८ घन्टासम्म सुतिसकेपछि शरीरलाई फेरि उर्जा प्राप्त गर्न खाद्यपदार्थको आवश्यकता पर्छ । बिहानको नास्ताले ब्लड सुगरलाई स्थिर राख्छ जसले गर्दा दिनभर भोक लागिरहँदैन ।
यदि आफ्नो नास्तामा प्रोटिनयुक्त वस्तुहरु समावेश गरियो भने बारम्बार भोक लाग्ने समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
भोक शान्त गर्ने एउटा उपाय टन्न पानी पिउनु पनि हो । पर्याप्त पानी नपिउँदा शरीर डिहाइड्रेट हुन्छ र हामी थाहा पाउन सक्दैनौं के भइरहेको छ भनेर ।
हामीलाई लाग्छ कि केही खाएमा ठिक हुन्छ र खाइरहन्छौं । जाडोमा पानीको कमीले अक्सर यो समस्या हुन्छ । यसले गर्दा तौल पनि कम हुन्छ र कमजोरी बढ्छ ।
शरीरलाई सम्पूर्ण आहाराको आवश्यकता हुन्छ । यस्तोमा ‘फिगर कन्सस’ भएर महिलाहरु क्यालोरी कम भएको खाना खाने गर्छन् । यस्तो खानेकुरा शरीरका लागि हानिकारक हुन्छ ।
शरीरमा पर्याप्त मात्रामा क्यालोरीको त्यति नै आवश्यकता हुन्छ जति अन्य पौष्टिक तत्वको । क्यालोरीरहित खानेकुरा खाइयो भने शरीरमा यसको कमि यथावत रहन्छ र सदैव भोक लागिरहन्छ ।
यदि माथिका कुराहरु पालना गर्दा पनि बारम्बार भोक लाग्ने समस्या हटेन भने एक पटक डाक्टरलाई भेट्नु राम्रो हुन्छ । हुन सक्छ कुनै रोगले गर्दा यस्तो भइरहेको होस ।
कतिपय अवस्थामा मधुमेह जस्ता रोगहरुको सुरुवाति चरणमा पनि भोक लागिरहने समस्या हुन्छ ।
भोक लाग्नु शरीरको स्वभाविक प्रक्रिया हो । निश्चित समयावधीमा हामीलाई भोक अनुभव हुन्छ । तर, कहिले काहिँ खाना खाए लगत्तै भोक लागेको महसुष हुन्छ । यदि त्यसो हो भने, यसले शरीरमा केहि न केहि गडबडी छ भन्ने संकेत गर्छ ।
Don't Miss it हाम्रै घरको भान्छामा हुने तरकारीहरुले यस्ता सम्म रोग ठिक पार्छन्, खाने तरिका सहित
Up Next के तपाएकाे कपालमा चाँया छ ? यसरी हटाउनुहोस्
आङ खस्ने समस्याले जिन्दगी बिगार्न सक्छ, तर यसको उपचार सित्तैमा छ, पढ्नुहोस् र पढाउँनुहोस्
नेपाली महिलाहरुको प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरु मध्ये पाठेघर झर्ने (खस्ने) ‘जसलाई आङ खस्ने पनि भनिन्छ’ एक मुख्य समस्या हो ।…